ဘာအတွက်လဲ? - www.yomeliah.com
中文 日本語 한국어 ไทย ខ្មែរ Tiếng Việt ລາວ
twitter ပေါ်ရှိဆောင်းပါး၏ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုကိုကြည့်ရှုရန်လင့်ခ်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ (အကယ်၍ သင့်တွင်အကောင့်တစ်ခုရှိပါက)
"ယေဟောဝါ​ဘု​ရား၊ ကျွန်တော် ဘယ်​အချိန်​အထိ အော်​ဟစ် အကူ​အညီတောင်း​ရ​မှာ​လဲ။ ဘယ်​အချိန်​ကျ​မှ ကြား​မှာ​လဲ။ အကြမ်း​ဖက်​မှု​က​နေ ကယ်​တင်​ပေး​ပါ​လို့ ဘယ်​အချိန်​အထိ အကူ​အညီတောင်း​ရ​မှာ​လဲ။ ဘယ်​အချိန်​ကျ​မှ ကယ်​တင်​မှာ​လဲ။ ကျွန်​တော့်​ကို မကောင်း​မှု​တွေ ဘာလို့​မြင်​စေ​တာ​လဲ။ ဖိ​နှိပ်​သူ​တွေ​ကို ကိုယ်​တော် ဘာ​လို့ သည်း​ခံ​နေ​တာ​လဲ။ အကြမ်း​ဖက်​မှု​တွေ၊ ဖျက်​ဆီး​မှု​တွေ ကျွန်​တော့်​ရှေ့​မှာ ဘာ​လို့​ဖြစ်​နေ​တာ​လဲ။ ငြင်း​ခုံ​ရန်​ဖြစ်​တာ​တွေ ဘာ​လို့ ဒီလောက်​များ​နေ​တာ​လဲ။ အဲဒီ​လို​ဖြစ်​နေ​တော့ တ​ရား​ဥ​ပ​ဒေ​ဟာ ဘာ​မှ အရာ​မရောက်​တော့​ဘူး။ တ​ရား​မျှ​တ​စွာ မလုပ်​ဆောင်​ကြ​ဘူး။ ဖြောင့်​မတ်​သူ​ကို လူ​ဆိုး​တွေ​ ဝိုင်းထား​တဲ့​အတွက် အမှန်​တ​ရား​ဟာ က​ပြောင်း​က​ပြန်​ ဖြစ်​ကုန်​ပြီ"
"အဲဒီ​နောက် နေ​အောက်​မှာ ဖြစ်​နေ​တဲ့ ဖိ​နှိပ်​တဲ့ လုပ်​ရပ်တွေ​အ​ကြောင်း ငါ​စူး​စမ်း​မိ​တယ်။ ဖိ​နှိပ်​ခံ​ရ​သူ​တွေ ငို​ကြွေး​နေ​ပေမဲ့ နှစ်​သိမ့်​ပေး​သူ​တစ်​ယောက်​မှ မရှိ​မှန်း ငါ​မြင်​တယ်။+ ဖိ​နှိပ်​သူ​တွေ​က သြဇာ​အာ​ဏာ​ရှိ​သူ​တွေ​ဖြစ်​လို့ နှစ်​သိမ့်​ပေး​သူ တစ်​ယောက်​မှ မရှိ​ဘူး။ (...) အချည်း​နှီး​ဖြစ်​တဲ့ ငါ့​သက်​တမ်း​အတွင်း​မှာ+ အရာ​အားလုံး​ကို ငါ​မြင်​ခဲ့ရ​တယ်။ ရိုး​ဖြောင့်​လျက်​နဲ့ အသက်​တို​တဲ့ ဖြောင့်​မတ်​သူ​ကို​ရော ဆိုး​ညစ်​နေ​လျက်​နဲ့ အသက်​ရှည်​တဲ့ လူ​ဆိုး​ကို​ပါ ငါ​မြင်​ခဲ့ရ​တယ်။ (...) နေ​အောက်​မှာ လုပ်​ဆောင်​နေ​တဲ့ အလုပ်​အမျိုး​မျိုး​အကြောင်း ဆင်​ခြင်​ကြည့်​လိုက်​တဲ့​အခါ ငါ​နား​လည်​သွား​တာ တစ်​ချက်​ရှိ​တယ်။ ခေတ်​အဆက်​ဆက်​မှာ လူ​လူ​ချင်း အုပ်​ချုပ်​တာ​ဟာ ထိ​ခိုက်​နစ်​နာ​စ​ရာတွေ​ပဲ ဖြစ်​စေ​တယ်။ (...) ကမ္ဘာ​ပေါ်​မှာ​ဖြစ်​နေ​တဲ့ စိတ်​ပျက်​စ​ရာ​ကောင်း​တဲ့ အရာ​တစ်​ခု​ရှိ​တယ်။ ဆိုး​ညစ်​သူ​တွေ ခံ​ထိုက်​တဲ့​အရာ​ကို ဖြောင့်​မတ်​သူ​တွေ ခံ​နေ​ရ​ပြီး ဖြောင့်​မတ်​သူ​တွေ ခံ​ထိုက်​တဲ့​အရာ​ကို လူ​ဆိုး​တွေ ခံ​နေ​ရ​တယ်။ ဒါ​လည်း အချည်း​နှီး​ပါ​ပဲ။ (...) ကျွန်​တွေ​က မြင်း​စီး​ပြီး မင်း​ညီ​မင်းသား​တွေ​က​တော့ ကျွန်​လို ခြေ​ကျင်​လျှောက်​နေ​တာ ငါ​တွေ့​ဖူး​တယ်"
(ဒေ။ ၄:၁; ၇:၁၅; ၈:၉၊၁၄; ၁၀:၇)
"ဘာ​ကြောင့်​လဲ​ဆို​တော့ ဖန်​ဆင်း​ရာတွေ အချည်း​နှီး​အဖြစ်​ကို ရောက်ခဲ့ရလို့​ပဲ။ ဆန္ဒ​အလျောက် ရောက်ခဲ့ရ​တာ​တော့ မဟုတ်​ဘူး။​ အချည်း​နှီး​အဖြစ်​ကို ရောက်​သွား​အောင် ခွင့်​ပြု​လိုက်​တဲ့ အရှင်​ရဲ့ အလို​တော်​ကြောင့်​သာ ဖြစ်​ရ​တာ​ပါ။ ဒါ​ပေမဲ့ အဲ​ဒီ​အရှင်​ပေး​ထား​တဲ့ မျှော်​လင့်​ချက်​က​တော့"
"စမ်းသပ်​မှု ကြုံ​ရ​တဲ့​အခါ “ငါ့​ကို ဘုရား​သခင် စမ်းသပ်​နေ​တာ​ပဲ” လို့ မပြော​ကြ​နဲ့။ မကောင်း​တဲ့​အရာတွေ​နဲ့ ဘုရား​သခင်​ကို ဘယ်သူ​မှ စမ်းသပ်​လို့ မရ​သလို ဘုရား​သခင်​က​လည်း ဘယ်သူ့​ကို​မှ မကောင်း​တဲ့​အရာ​နဲ့ မစမ်းသပ်​ဘူ"
စာတန်တွင်တာဝန်ရှိသည်၊ သူ့ကိုသမ္မာကျမ်းစာတွင်စွပ်စွဲသူဟုခေါ်သည် (ဗျာဒိတ် ၁၂: ၉)။ ဘုရားသခင့်သားတော်ယေရှုခရစ်ကမာရ်နတ်သည်လူသားကိုသတ်ဖြတ်သူဖြစ်သည် (ယော ၈:၄၄)။ အဓိကစွဲချက်နှစ်ခုရှိပါသည်။
၁ - ဘုရားသခင်၏အချုပ်အခြာအာဏာ၏မေးခွန်း။
၂ - လူ့သမာဓိရှိမှုမေးခွန်း။
ကြီးလေးသောစွပ်စွဲချက်များရှိပါကနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်။ ဒံယေလအခန်းကြီး ၇ ၏ပရောဖက်ပြုချက်တွင်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ဘုရားသခင်၏အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ခုံရုံး၏အခြေအနေကိုဖော်ပြထားသည်။ “သူ့​ဆီ​က​နေ မီး​တွေ ချောင်း​လို​စီး​ဆင်း​လာ​တယ်။ သန်း​နဲ့​ချီ​တဲ့​သူ​တွေ သူ့​ဆီ​မှာ အမှု​ထမ်း​ကြ​တယ်။ သန်း​ရာ​ချီ​ရှိ​တဲ့​သူ​တွေ သူ့​ရှေ့​မှာ ခစား​နေ​ကြ​တယ်။ တရား​ရုံး ဖွင့်​လှစ်​ပြီ။ စာ​စောင်​တွေ​ကို ဖွင့်​ထား​တယ်။ (...) ဒါ​ပေမဲ့​ တရား​ရုံး ဖွင့်​လှစ်​ပြီး သူ့​ရဲ့ အုပ်​ချုပ်​ခွင့်​အာ​ဏာ​ကို ရုပ်​သိမ်း​လိမ့်​မယ်။ သူ့​ကို အစ​တုံး ဖျက်​ဆီး​လိမ့်​မယ်" (ဒံယေလ ၇:၁၀၊၂၆)။ ကမ္ဘာမြေကြီးသည်ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လာလိမ့်မည်။ ဟေရှာယအခန်းကြီး ၄၃ တွင်ဘုရားသခင်ကိုနာခံသူများသည်သူ၏“သက်သေမျာ": ”ယေဟောဝါ ပြော​တယ်– “မင်း​တို့​ဟာ ငါ့​ရဲ့​သက်​သေတွေ​ပဲ။ ငါ့​ကို​သိ​ရှိ​ပြီး ယုံ​ကြည်​သက်​ဝင်​စေ​ဖို့၊ ငါ​ဟာ မပြောင်း​လဲ​တဲ့​ အရှင်​ဖြစ်​မှန်း နား​လည်​စေ​ဖို့ ငါ​ရွေး​ချယ်​ထား​တဲ့ ကျွန်​ပဲ။ ငါ့​အရင် ဘယ်​ဘု​ရား​သခင်​မှ မရှိ​ခဲ့​ဘူး။ ငါ့​နောက်​မှာ​လည်း ဘယ်​ဘု​ရား​မှ ရှိ​မှာ​မဟုတ်​ဘူး။ ငါ​ဟာ ယေဟောဝါ​ပဲ။ ငါ​က​လွဲ​လို့ တ​ခြား​ကယ်​တင်​ရှင် မရှိ​ဘူး။”” (ဟေရှာ ၄၃:၁၀၊ ၁၁) ။ ယေရှုခရစ်အား“ သစ္စာရှိသောသက်သေ” ဟုလည်းခေါ်သည် (ဗျာဒိတ် ၁:၅)။
ဤကြီးလေးသောစွပ်စွဲချက်နှစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည်နှစ်ပေါင်း ၆,၀၀၀ ကျော်စာတန်နှင့်လူသားတို့အားဘုရားသခင့်အချုပ်အခြာအာဏာမရှိဘဲကမ္ဘာမြေကြီးကိုအုပ်ချုပ်နိုင်မနိုင်သူတို့၏သက်သေသာဓကများကိုတင်ပြခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအတွေ့အကြုံ၏အဆုံး၌လူသားတို့ကြုံတွေ့ရသောအကြီးအကျယ်ပျက်စီးခြင်းအခြေအနေ (မဿဲ ၂၄:၂၂)။ တွင်မာရ်နတ်၏မုသာစကားကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ကြီးစွာသောဒုက္ခ၌တရားစီရင်ခြင်းနှင့်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရလိမ့်မည် (မဿ ၂၄း ၂၁၊ ၂၅း ၃၁-၄၆)။ ယခုမာရ်နတ်၏စွပ်စွဲချက်နှစ်ခုကိုကမ္ဘာ ဦး အခန်းကြီး ၂ နှင့် ၃ နှင့်ယောဘကျမ်းအခန်းကြီး ၁ နှင့် ၂ တို့တွင်ပိုမိုတိကျစွာဖော်ပြကြပါစို့။
၁ - ဘုရားသခင်၏အချုပ်အခြာအာဏာ၏မေးခွန်း
ကမ္ဘာ ဦး အခန်းကြီး ၂ ကဘုရားသခင်သည်လူကိုဖန်ဆင်းပြီးhimဒင်ဥယျာဉ်ထဲ၌နေရာချထားကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ အာဒံသည်အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွင်ရှိနေပြီးလွတ်လပ်မှုများစွာခံစားခဲ့ရသည် (ယော ၈း ၃၂)။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်ဤလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်။ သစ်ပင်: “ယေဟောဝါ​ဘုရားက လူကို ဧဒင်​ဥယျာဉ်​မှာ နေခိုင်း​တယ်။ ဥယျာဉ်​ကို ထွန်ယက်​စိုက်ပျိုး​ပြီး ထိန်းသိမ်း​စောင့်ရှောက်​ခိုင်း​တယ်။ ပြီးတော့ ယေဟောဝါ​ဘုရားက “ဥယျာဉ်​ထဲမှာရှိတဲ့ အပင်​အားလုံးရဲ့ အသီး​ကို မင်း စိတ်ကြိုက်​စား​ခွင့်​ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကောင်းအဆိုး သိကျွမ်း​ရာ​အပင်​ရဲ့ အသီး​ကို​တော့ မစား​နဲ့။ စားတဲ့​နေ့​မှာ မင်း သေကို​သေ​ရမယ်” လို့ သူ့ကို မိန့်မှာ​တယ်” (ကမ္ဘာ ဦး၂း၁၅-၁၇)။ “ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်” ဘုရားသခင်အားနာခံခြင်းနှင့်နာခံမှုကင်းမဲ့ခြင်း၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၏တိကျသောကိုယ်စားပြုချက်ဖြစ်သည်။
"မြွေ​ဟာ ယေဟောဝါ​ဘုရား ဖန်ဆင်း​တဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ​ထဲမှာ သတိ​အကြီးဆုံး​ပဲ။* မြွေ​က မိန်းမ​ကို “ဥယျာဉ်​ထဲမှာရှိတဲ့ အပင်​အားလုံးရဲ့ အသီး​ကို မစား​နဲ့​လို့ ဘုရား​သခင် တကယ်ပဲ ပြော​သလား” ဆို​ပြီး မေးတယ်။ မိန်းမ​က “ဥယျာဉ်​ထဲမှာရှိတဲ့ အပင်​တွေ​ရဲ့ အသီး​ကို ကျွန်မတို့ စား​လို့ ရ​ပါတယ်။ ဥယျာဉ်​ထဲက အပင်​တစ်ပင်​ရဲ့ အသီး​ကို​တော့ ‘မစား​နဲ့၊ မထိ​နဲ့။ စား​မယ်၊ ထိ​မယ်ဆိုရင် သေ​ရမယ်’ ဆို​ပြီး ဘုရား​သခင် မှာ​ထားတယ်” လို့ ပြန်ဖြေ​တယ်။ မြွေ​က​လည်း “မင်း​တို့ လုံးဝ သေ​မှာ မဟုတ်ဘူး။ ၅ တကယ်တော့ အဲဒီ​အသီး​ကို စားတဲ့​နေ့မှာပဲ မျက်စိပွင့်* လာမယ်၊ အကောင်းအဆိုး​ကို သိလာပြီး ဘုရား​လို ဖြစ်လာမယ်​ဆို​တာ+ ဘုရား​သခင် သိတယ်” လို့ ပြောတယ်။ အဲဒီ​အပင်​ရဲ့ အသီး​ဟာ စား​ချင်​စရာ၊ လှပပြီး မက်မော​စရာ​ကောင်းတာကို မိန်းမ မြင်တဲ့အခါ ခူးစား​လိုက်တယ်။ လူယောက်ျား​ကို ပေး​တော့ သူ​လည်း စား​တယ်" (ကမ္ဘာ ဦး ၃း၁-၆)။
ဘုရားသခင်၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုမာရ်နတ်ကပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တိုက်ခိုက်သည်။ စာတန်သည်ဘုရားသခင်သည်မိမိ၏သတ္တဝါများကို“ ဘုရားသခင်သိတော်မူသည်” ကိုထိခိုက်စေရန်သတင်းအချက်အလက်များကိုသိုဝှက်ထားသည်ဟုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူဘုရားသခင်သည်အခြေအနေကိုအမြဲတမ်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့သည်။
ထိုနေ့မကုန်မီ၊ နေဝင်ချိန်မတိုင်မီလေးတွင်ဘုရားသခင်သည်မိမိ၏စီရင်ချက်ကိုစီရင်ခဲ့သည် (ကမ္ဘာ ဦး ၃း ၈-၁၉)။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည်တရားစီရင်ခြင်းမပြုမီမေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့သည်။ အဖြေမှာ "ယောက်ျား​က “ကိုယ်တော် ပေး​တဲ့ မိန်းမ​က အဲဒီ​အပင်​ရဲ့ အသီး​ကို ကျွေး​လို့ ကျွန်တော် စား​မိ​တာ​ပါ” ဆို​ပြီး ဖြေ​တယ်။ ဒါနဲ့ ယေဟောဝါ​ဘုရားက “မင်း ဘယ်လို လုပ်​လိုက်တာလဲ” လို့ မေးတဲ့အခါ မိန်းမ​က “မြွေ​လှည့်စား​လို့ စား​မိ​တာ​ပါ” လို့ ဖြေ​တယ်" (ကမ္ဘာ ဦး ၃း ၁၂၊၁၃)။ အာဒံနှင့်သူ၏ဇနီးတို့သည်မိမိတို့အပြစ်ရှိသည်ဟု ၀ န်မခံခဲ့ပါ၊ ကမ္ဘာ ဦး ၃း ၁၄-၁၉ တွင်ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ "မင်း​နဲ့ မိန်းမ​ကိုရော မင်း​ရဲ့ မျိုးနွယ်​နဲ့ မိန်းမ​ရဲ့ မျိုးနွယ်​ကို​ပါ ငါ​ရန်ငြိုး​ဖွဲ့​စေမယ်။ သူက မင်း​ရဲ့ ခေါင်း​ကို ကြိတ်​လိမ့်မယ်။ မင်း​လည်း သူ့​ဖနောင့်​ကို ပေါက်​ရ​လိမ့်မယ်” လို့ ပြောတယ်" ဤကတိတော်အားဖြင့်ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည်မိမိ၏ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်စာတန်မာရ်နတ်ဖျက်ဆီးခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အပြစ်တရားသည်ဤလောကသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း၏အဓိကအကျိုးဆက်ဖြစ်သောသေခြင်းသို့ရောက်ခဲ့သည်: “အပြစ်​ဟာ လူ​တစ်​ယောက်​ကြောင့် လူ့​လော​က​ထဲ ရောက်​လာ​တယ်။ အပြစ်​ကြောင့် သေခြင်း​လည်း ပေါ်​ပေါက်​လာ​တယ်။+ ဒါ​ကြောင့် လူ​အား​လုံး​ဟာ အပြစ်​ရှိ​သူ​တွေ ဖြစ်​သွား​တဲ့အတွက် သေဆုံး​ကြ​ရ​တယ်" (ရောမ ၅း ၁၂)။
၂ - လူ့သမာဓိရှိမှုမေးခွန်း
"ယေဟောဝါ​က “ဘယ်​က​လာ​တာ​လဲ” လို့​မေး​တဲ့​အခါ စာ​တန်​က “ကမ္ဘာ​အနှံ့ လှည့်​လည်​ပြီး လာခဲ့​တာ” လို့ ယေဟောဝါ​ကို ဖြေတယ်။ ဒါ​နဲ့ ယေဟောဝါ​က “ငါ့​ကျွန် ယောဘ​ကို သတိ​ထား​မိ​သလား။ ကမ္ဘာ​ပေါ်​မှာ သူ့​လို​လူ တစ်​ယောက်​မှ မရှိ​ဘူး။ ရိုး​ဖြောင့်​သူ၊ သမာ​ဓိ​ရှိ​သူ၊ ဘုရား​သခင်​ကို ကြောက်​ရွံ့​သူ၊ မကောင်း​မှု​ကို ရှောင်​တဲ့​သူ​ပဲ” လို့​ပြော​တယ်။ အဲဒီ​အခါ စာ​တန်​က ယေဟောဝါ​ကို “ယောဘ​က ဘာ​အကျိုး​မှ​မရ​ဘဲ ဘုရား​သခင်​ကို ကြောက်​ပါ့​မလား။ ခင်​ဗျား​က သူ့​ကို​ရော သူ့​အိမ်​နဲ့ ပိုင်​ဆိုင်​သမျှ​ကို​ပါ ကာ​ကွယ်​ပေး​ထား​တာ​ကိုး။ သူ​လုပ်​သမျှ​ကို ကောင်း​ချီး​ပေး​ပြီး ခြံ​မွေး​တိရစ္ဆာန်တွေ​ကို​လည်း ပွား​များ​စေ​တာ​ကိုး။ ဒါ​ပေမဲ့၊ အခု လက်​ကို​ဆန့်​ပြီး သူ​ပိုင်​ဆိုင်​သမျှ​ကို ဖျက်​ဆီး​ကြည့်​ပါ​လား၊ ခင်​ဗျား​ကို ရှေ့​မှာ​တင် ကျိန်း​သေကျိန်​ဆဲ​လိမ့်​မယ်” လို့​ပြန်​ပြော​တယ်။ ဒါ​နဲ့ ယေဟောဝါ​က “ကောင်း​ပြီ။ သူ​ပိုင်​ဆိုင်​သမျှ မင်း​လက်​ထဲ​မှာ​ရှိ​တယ်။ လူ​ကို​တော့ မထိ​နဲ့” လို့​ပြော​တယ်။ စာတန်​လည်း ယေဟောဝါ​ရှေ့​က​နေ ထွက်​သွား​တယ်။ (...) ယေဟောဝါ​က “ဘယ်​က​လာ​တာ​လဲ” လို့​ မေး​တဲ့​အခါ စာ​တန်​က “ကမ္ဘာ​အနှံ့ လှည့်​လည်​ပြီး လာခဲ့​တာ” လို့ ယေဟောဝါ​ကို ဖြေတယ်။ ဒါ​နဲ့ ယေဟောဝါ​က “ငါ့​ကျွန်​ယောဘ​ကို သတိ​ထား​မိ​သလား။ ကမ္ဘာ​ပေါ်​မှာ သူ့​လို လူ​တစ်​ယောက်​မှ မရှိ​ဘူး။ ရိုး​ဖြောင့်​သူ၊ သမာ​ဓိ​ရှိ​သူ၊ ဘုရား​သခင်​ကို ကြောက်​ရွံ့​သူ၊ မကောင်း​မှု​ကို ရှောင်​တဲ့​သူ ဖြစ်​တယ်။ သူ့​ကို အကြောင်း​မရှိ​ဘဲ ဒုက္ခ​ပေး​ဖို့ မင်း​တိုက်​တွန်း​ပေမဲ့ သူ​က​တော့ သမာ​ဓိ​ခိုင်​မြဲနေ​တုန်း​ပဲ” လို့​ပြော​တယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ စာ​တန်​က ယေဟောဝါ​ကို “အသက်​အတွက် အသက်​ဆို​သလို​ပေါ့။ လူ​ဟာ အသက်​ဆက်​ရှင်​ဖို့ ကိုယ်​ပိုင်​ဆိုင်​သမျှ​ကို ပေး​မှာ​ပဲ။ အခု လက်​ကို​ဆန့်​ပြီး သူ့​အရိုး​နဲ့​အသား​ကို ထိ​ခိုက်​ကြည့်​ပါ​လား။ ခင်​ဗျား​ကို ရှေ့​မှာ​တင် ကျိန်း​သေ ကျိန်​ဆဲ​လိမ့်​မယ်” လို့​ပြော​တယ်။ အဲဒီ​အခါ ယေဟောဝါ​က​ “ကောင်း​ပြီ။ သူ​ဟာ မင်း​လက်​ထဲ​မှာ ရှိ​တယ်။ သူ့​အသက်​ကို​တော့ မထိ​နဲ့” လို့​ပြော​တယ်” (ယောဘာ ၁း ၇-၁၂; ၂း၂-၆)။
လူသားတို့၏အမှားသည်စာတန်၏အဆိုအရသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်အကျိုးစီးပွားနှင့်အခွင့်အလမ်းထဲက။ ဖိအားများအောက်တွင်လူသားများသည်ဘုရားသခင်အပေါ်သစ္စာမတည်နိုင်ပါ။ သို့သော်ယောဘကစာတန်သည်မုသာကောင်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ယောဘသည်သူ၏ပိုင်ဆိုင်ရာအားလုံးဆုံးရှုံးပြီးကလေး ၁၀ ယောက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ သူသည်ဖျားနာမှုကြောင့်သေလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည် (ယောဘ ၁၊ ၂)။ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ကယောဘကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေအတုအယောင်များကယောဘအားပြောခဲ့သည်သူ၏ကံမကောင်းအကြောင်းမလှမှုများအားလုံးသည်လျှို့ဝှက်အပြစ်များကြောင့်ဖြစ်သဖြင့်ဘုရားသခင်သည်သူ့အပြစ်နှင့်ဆိုးသွမ်းမှုအတွက်သူ့ကိုအပြစ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ယောဘသည်သူ၏သမာဓိကိုမစွန့်လွှတ်ဘဲ: “ခင်​ဗျား​တို့​ကို ဖြောင့်​မတ်​တယ်​လို့ ပြော​ဖို့​ဆို​တာ ဝေ​လာ​ဝေး​ပဲ။သေတဲ့​အထိ ကျုပ်​ရဲ့​သမာ​ဓိ​ကို မစွန့်​ဘူ" (ယောဘ ၂၇း ၅)။
လူသား၏သမာဓိနှင့် ပတ်သက်၍ မာရ်နတ်အားအရေးအပါဆုံးရှုံးနိမ့်မှုမှာသေသည်အထိဘုရားသခင်ကိုနာခံသောယေရှုခရစ်၏အောင်ပွဲဖြစ်သည်။ "အဲ​ဒီ​အပြင် လူ​သား​တစ်​ယောက်​အနေ​နဲ့ ရှိနေ​ချိန်​မှာ​လည်း ကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုယ် နှိမ့်​ချ​ပြီး ဒုက္ခ​သစ်​တိုင်​ပေါ်* အသေခံ​တဲ့အထိ နာ​ခံ​ခဲ့​တယ်" (ဖိလိပ္ပိ ၂:၈)။သခင်ယေရှုသည်သူ၏သမာဓိစောင့်သိခြင်းအားဖြင့်ခမည်းတော်အားအလွန်ကောင်းသောဝိညာဉ်ရေးအောင်ပွဲကိုပေးခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်သူသည်ဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ "အဲ​ဒါ​ကြောင့် ဘု​ရား​သခင်​က သူ့​ကို သာ​လွန်​မြင့်မြတ်​တဲ့ အနေ​အထား​ရောက်​အောင် ချီး​မြှောက်​ပြီး ဘွဲ့​နာ​မတ​ကာ​ထက် ကြီးမြတ်​တဲ့​ဘွဲ့​နာ​မကို ပေး​သနား​လိုက်​ပြီ။ ဒါ​ကြောင့် ကောင်းကင်​မှာရှိ​တဲ့​သူ​တွေ၊ မြေကြီး​ပေါ်​မှာ​ရှိ​တဲ့​သူ​တွေ၊ မြေကြီး​အောက်​မှာ​ရှိ​တဲ့​သူ​တွေ အား​လုံး​ဟာ ယေရှု​ရဲ့ နာ​မည်​ကို ဒူး​ထောက်​ရ​လိမ့်​မယ်။ လူ​တိုင်း​က ယေရှု​ခ​ရစ်​ဟာ အဖဘု​ရား​သခင်​ရဲ့ ဘုန်း​တော်​ကို ထင်​ရှား​စေ​တဲ့ သခင်​ဖြစ်​မှန်း လူ​သိ​ရှင်​ကြား အသိ​အမှတ်​ပြု​ရ​လိမ့်​မယ်" (ဖိလိပ္ပိ ၂:၉-၁၁)။
၁ - မာရ်နတ်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေသောသူဖြစ်သည် (ယောဘ ၁း၇-၁၂၊ ၂း၁-၆)။ ယေရှုခရစ်၏အဆိုအရစာတန်သည်ဤလောကကိုအုပ်ချုပ်သူဖြစ်သည်။ “ ယခုတွင်ဤလောကကိုတရားစီရင်ခြင်းရှိ၏။ ယခုတွင်ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်” (ယော ၁၂း၃၁။ ၁ ယော ၅း၁၉)။ ထို့ကြောင့်လူသားတစ်ရပ်လုံးသည်မပျော်မရွှင်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်: “ဖန်​ဆင်း​ရာ​အား​လုံး အခု​ချိန်​အထိ တ​ညီ​တ​ညွတ်​တည်း ညည်း​တွား​ပြီး ဝေ​ဒ​နာ​ခံ​စား​နေ​ကြ​ရ​မှန်း ကျွန်​တော်​တို့ သိ​ကြ​တယ်” (ရော ၈း၂၂)။
၂ - ဆင်းရဲဒုက္ခသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရှိသောအခြေအနေ၏ရလဒ်ဖြစ်ပြီးအိုမင်းခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းနှင့်သေခြင်းသို့ပို့ဆောင်သည်။ "အပြစ်​ဟာ လူ​တစ်​ယောက်​ကြောင့် လူ့​လော​က​ထဲ ရောက်​လာ​တယ်။ အပြစ်​ကြောင့် သေခြင်း​လည်း ပေါ်​ပေါက်​လာ​တယ်။ ဒါ​ကြောင့် လူ​အား​လုံး​ဟာ အပြစ်​ရှိ​သူ​တွေ ဖြစ်​သွား​တဲ့အတွက် သေဆုံး​ကြ​ရ​တယ်။ (...) အပြစ်​က​ပေး​တဲ့ အခ​ဟာ သေခြင်း​ပဲး” (ရော ၅း၁၂၊ ၆း၂၃) ။
၃ - ဆင်းရဲခက်ခဲမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားများ (ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှဖြစ်စေ၊ အခြားလူသားတို့၏) ဖြစ်စေနိုင်သည်။ “လုပ်​ချင်​တဲ့​ကောင်း​မှု​ကို မလုပ်​ဘဲ မလုပ်​ချင်​တဲ့ မကောင်း​မှု​ကို​မှ လုပ်​မိ​နေ​တယ်" (တရား ၃၂း ၅၊ ရောမ ၇း ၁၉)။ ဆင်းရဲဒုက္ခသည်“ကံ၏နိယာမတရား (karma)” ၏ရလဒ်မဟုတ်ပါ။ ယောဟန်အခန်းကြီး ၉ တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်နိုင်သည်မှာ: "ယေရှု ဖြတ်​လျှောက်​သွား​ချိန်​မှာ မွေး​ရာ​ပါ မျက်​မမြင်​တစ်​ယောက်​ကို တွေ့​တယ်။ အဲဒီ​အခါ တ​ပည့်တွေ​က “ရဗ္ဗိ၊ သူ မျက်​စိ​မမြင်​ဘဲ မွေး​လာ​တာ သူ့​အပြစ်​ကြောင့်​လား။ မိဘ​ရဲ့​အပြစ်​ကြောင့်​လား” လို့​မေး​တော့၊ ယေရှု​က “သူ့​အပြစ်​ကြောင့် မဟုတ်​ဘူး။ မိ​ဘ​ရဲ့​အပြစ်​ကြောင့်​လည်း မဟုတ်​ဘူး။ သူ​အဲဒီ​လို​ဖြစ်​နေ​တာ​ဟာ ဘု​ရား​သခင်​ရဲ့ လုပ်​ဆောင်​မှု​ကို လူ​တွေ မြင်​ခွင့်​ရ​စေ​ဖို့​ပဲ” (ယော ၉း၁-၃)။ သူ၏အမှု၌“ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်များ” သည်မျက်မမြင်သူကိုကုသပေးမည့်အံ့ဖွယ်အမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
၄ - ဆင်းရဲခက်ခဲမှုသည်ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအချိန်များနှင့်အဖြစ်အပျက်များ၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လူအားမှားယွင်းသောအချိန်တွင်မှားယွင်းသောနေရာ၌ရောက်ရှိစေနိုင်သည်: “နေ​အောက်​မှာ ငါ​တွေ့​တဲ့​အရာ နောက်​တစ်​ခု​က​တော့– အပြေး​သန်​တယ်​ဆို​တိုင်း ပြေး​ပွဲ​မှာ အမြဲအနိုင်​ရ​တာ မဟုတ်​ဘူး။ အင်အား​ကြီး​တယ်​ဆို​တိုင်း စစ်​ပွဲ​မှာ အမြဲအနိုင်​ရ​တာ မဟုတ်​ဘူး။ ဉာဏ်​ပညာ​ရှိ​တယ်​ဆို​တိုင်း အမြဲစား​စ​ရာ​ရှိ​တာ မဟုတ်​ဘူး။ ဉာဏ်​ကောင်း​တယ်​ဆို​တိုင်း အမြဲချမ်း​သာ​ကြွယ်​ဝ​တာ မဟုတ်​ဘူး။ ဗ​ဟု​သု​တ​ကြွယ်​တယ်​ဆိုတိုင်း အမြဲအောင်​မြင်​တာ မဟုတ်​ဘူး။လူ​အားလုံး​ဟာ မျှော်​လင့်​မထား​တဲ့ အချိန်​မှာ မျှော်​လင့်​မထား​တဲ့ ဖြစ်​ရပ်တွေ ကြုံ​ရ​တတ်​လို့​ပဲ။ လူ​တွေ​ဟာ ကိုယ်​သေဆုံးမ​ယ့်​အချိန်​ကို မသိ​ကြ​ဘူး။ အန္တရာယ်​ပိုက်​ကွန်​မှာ မိ​သွား​တဲ့ ငါး​တွေ​လို၊ ထောင်​ချောက်​မိ​သွား​တဲ့ ငှက်​တွေ​လို လူ​သား​တွေ​လည်း ဘေး​ဆိုး​ကြုံ​ရ​တဲ့​အခါ ကျော့​ကွင်း​မိ​သွား​ပြီး အဲဒီ​အချိန်​ကို မထင်​မမှတ်​ဘဲ ကြုံ​တွေ့​ရ​တတ်​တယ်" (ဒေသနာ ၉း၁၁၊၁၂)။
သေဆုံးမှုများစွာဖြစ်စေခဲ့သောကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ယေရှုခရစ်မိန့်တော်မူသည်မှာ: “အဲဒီ​အခါ လူ​တ​ချို့​ရောက်​လာ​ပြီး ပူ​ဇော်​သက္ကာ ဆက်​သနေ​တဲ့ ဂါ​လိ​လဲ​လူ​တ​ချို့​ကို ပိလတ်​မင်း သတ်​လိုက်​တဲ့​အကြောင်း ယေရှု​ကို သတင်း​ပေး​ကြ​တယ်။ ယေရှု​က “အဲဒီ​ ဂါလိ​လဲ​လူ​တွေ​ဟာ တ​ခြား​ဂါ​လိ​လဲ​လူ​တွေ​ထက် အပြစ်​ကြီး​တဲ့​အတွက် အဲဒီ​လိုခံရ​တာ​လို့ ခင်​ဗျား​တို့ ထင်​နေ​သ​လား။ မဟုတ်​ဘူး​လို့ ကျွန်​တော်​ပြော​မယ်။ ခင်​ဗျား​တို့​လည်း နောင်​တ​မရ​ရင် ဖျက်​ဆီး​ခံ​ရ​မှာ​ပဲ။ ရှိ​လောင်​မျှော်​စင် ပြို​လဲ​လို့ ပိ​သေသွား​တဲ့ လူ ၁၈ ယောက်​က​ရော။ ဂျေရု​ဆ​လင်​မြို့​မှာ​နေ​တဲ့ လူ​တွေ​ထက် သူတို့ ပို​အပြစ်​ကြီး​တယ်​လို့ ခင်ဗျား​တို့ ထင်​နေ​သလား။ ၅ မဟုတ်​ဘူး​လို့ ကျွန်​တော်​ပြော​မယ်။ ခင်​ဗျား​တို့​လည်း နောင်​တ​မရရင် ဖျက်​ဆီး​ခံ​ရ​မှာ​ပဲ” လို့​ပြော​တယ်” (လုကာ ၁၃း၁-၅)။ ယေရှုခရစ်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မျှမိန့်တော်မမူခဲ့ပါမတော်တဆမှုသို့မဟုတ်သဘာဝဘေးဒဏ်များခံရသူများသည်အခြားသူများထက်ပိုပြီးအပြစ်ပြုမိကြသည်။ ဤဒုက္ခများကိုဘုရားသခင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်ပါ။
ဘုရားသခင်သည်ဤဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။ "အဲ​ဒီ​အခါ ရာ​ဇ​ပလ္လင်​က​နေ ကျယ်​လောင်​တဲ့​အသံ ထွက်​ပေါ်​လာ​တာ ကျွန်​တော်​ ကြား​တယ်– “ဘု​ရား​သခင်​ရဲ့ တဲ​တော်​ဟာ လူ​တွေ​နဲ့​အတူ​ ရှိ​ပြီး ဘု​ရား​က သူ​တို့​ဆီ​မှာ စံ​မြန်း​မယ်။ သူ​တို့​လည်း ဘုရား​ရဲ့လူမျိုး ဖြစ်​လိမ့်​မယ်။ ဘု​ရား​သခင်​ကိုယ်တိုင် သူ​တို့​နဲ့​အတူ ရှိ​နေ​မယ်။ ဘုရား​သခင်​က သူ​တို့​ရဲ့ မျက်​ရည်​ရှိ​သမျှ​ကို သုတ်​ပေး​လိမ့်​မယ်။ သေခြင်း​ရှိတော့​မှာ မဟုတ်​ဘူး။ ငို​ကြွေး​မြည်​တမ်း​ခြင်း၊ အော်​ဟစ်​ခြင်း၊ နာ​ကျင်​ခြင်းလည်း ရှိ​တော့​မှာ မဟုတ်​ဘူး။ အရင်​က​ဖြစ်​ဖူး​တာ​တွေ ကွယ်​ပျောက်​သွား​ပြီ” (ဗျာဒိတ် ၂၁း၃၊၄)။
"ကံကြမ္မာ" သည်သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမကောင်းကိုပြုလုပ်ရန်“ ပရိုဂရမ်” မဟုတ်သော်လည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်မှု” အရကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမကောင်းကိုပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်သည် (တရား ၃၀း၁၅) ။ ကံကြမ္မာနှင့်ပတ်သက်သောဤအမြင်သည်များစွာသောသူတို့သည်ဘုရားသခင့်အနာဂတ်ကိုသိရှိရန်စွမ်းရည်ရှိသည်ဟူသောအယူအဆနှင့်အနီးကပ်ဆက်စပ်နေသည်။ ဘုရားသခင်သည်အနာဂတ်ကိုသိရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်အသုံးပြုသည်ကိုသမ္မာကျမ်းစာမှကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
အာဗြဟံ၏ပုံသက်သေကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ကမ္ဘာ ဦး ၂၂း၁-၁၄ တွင်ဘုရားသခင်သည်သား အစ္စရေး ဇာက်ကိုပူဇော်ရန်အာဗြဟံအားတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကြိုတင်သိသလားအာဗြဟံသည်နာခံခြင်းရှိမည်လော။ မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးအချိန်၌ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုဤသို့မလုပ်ရန်ပြောခဲ့သည်: “ကောင်းကင်တမန်က “မင်း​ရဲ့​သားကို မ​သတ်​နဲ့။ သူ့ကို ဘာမှ​မလုပ်ပါနဲ့။ တစ်ဦးတည်း​သော သားကို​တောင် ပေး​တဲ့​အတွက် မင်းဟာ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့သူ​ဖြစ်မှန်း အခု ငါ​သိ​ပြီ” လို့​ပြောတယ်” (ကမ္ဘာ ဦး ၂၂း၁၂)။ သင်သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြောင်းကိုယခုငါသိ၏ဟုကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်။ "ယခု" ဟူသောအသုံးအနှုနျးကဖျောပွထားသညျအာဗြဟံသည်ဤတောင်းဆိုချက်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်လိုက်နာမည်ကိုဘုရားသခင်မသိခဲ့ပါ။
ဒုတိယဥပမာသည်သောဒုံနှင့်ဂေါမောရမြို့ပျက်စီးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ဘုရားသခင်သည်မကောင်းသောအခြေအနေကိုကြည့်ရှုရန်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကိုစေလွှတ်တော်မူခြင်းကသူ၌ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သက်သေအထောက်အထားအားလုံးမရှိကြောင်းထပ်မံဖော်ပြသည်။ သူ၏စွမ်းရည်ကိုကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုခဲ့သည် (ကမ္ဘာ ဦး ၁၈း၂၀၊၂၁)။
သမ္မာကျမ်းစာပါပရောဖက်ပြုချက်ဆိုင်ရာစာအုပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ပါကဘုရားသခင်သည်အနာဂတ်ကိုသိရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုအလွန်တိကျသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ ရေဗက္ကာသည်အမြွှာနှင့်ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်။ ကလေးနှစ်ယောက်အနက်မည်သူသည်ဘုရားသခင်ရွေးချယ်သောလူမျိုး၏ဘိုးဘေးဖြစ်မည်နည်း (ကမ္ဘာ ဦး ၂၅း၂၁-၂၆)။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည်ကလေးငယ်နှစ် ဦး အားရိုးရှင်းသောမျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူတို့မည်သို့သောလူစားမျိုးဖြစ်သင့်ကြောင်းဘုရားသခင်မြင်ခဲ့သည်။ "ကျွန်​တော် သန္ဓေ​သား​လောင်း​အရွယ်​မှာ​တောင် ကိုယ်​တော်​မြင်​တယ်။ အင်္ဂါ​အစိတ်​အပိုင်း​လေး​တွေ တစ်ခု​မှ မရှိ​ခင်​က​တည်း​က ဘယ်​အပိုင်း​လေး​က ဘယ်​နေ့​မှာ ပုံပေါ်​လာ​မယ်​ဆို​တာ​ကို ကိုယ်​တော့်​စာ​စောင်​ထဲ​မှာ တစ်​ခု​မကျန် ရေး​မှတ်​ထား​တယ်" (ဆာလံ ၁၃၉း ၁၆)။ ဤအသိပညာကို အခြေခံ၍ ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ခဲ့သည် (ရော ၉း၁၀-၁၃၊ တ ၁း၂၄-၂၆“ အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်ခပ်သိမ်းသောသူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုသိတော်မူ၏”)။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင့်အတွေးအမြင်ကိုနားလည်ခြင်းမပြုမီအရေးကြီးသောကျမ်းစာအချက်သုံးချက်ကိုသုံးသပ်ရန်အရေးကြီးသည် (၁ ကော ၂း၁၆)
၁ - ယေရှုခရစ်သည်သေခြင်း၌အဆုံးသတ်ထားသောလက်ရှိဘဝသည်လူသားအားလုံးအတွက်ယာယီတန်ဖိုးရှိကြောင်းပြသခဲ့သည် (ယော ၁၁း၁၁ ဖြစ်သည် (လာဇရုသေဆုံးခြင်းကို“ အိပ်ပျော်ခြင်း”)။ ထို့အပြင်ထာဝရအသက်၏အလားအလာသည်အရေးကြီးကြောင်းယေရှုခရစ်ပြသခဲ့သည် (မ10ဲ ၁၀း၃၉)။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက“ မှန်သောအသက်” သည်ထာဝရအသက်မျှော်လင့်ချက်ကိုအဓိကထားသည် (၁ တိ ၆း ၁၉)။
တမန်တော်ဝတ္ထုကိုဖတ်သည့်အခါယာကုပ်နှင့်စတီဖင်အမှု၌ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကျွန်ကိုသေခြင်းမှမကာကွယ်ပေးကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (တ ၇း၅၄-၆၀; ၁၂း၂) ။ အခြားကိစ္စများတွင်ဘုရားသခင်သည်မိမိ၏ကျွန်ကိုကာကွယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဥပမာ၊ ယာကုပ်ယာကုပ်သေဆုံးပြီးနောက်တမန်တော်ပေတရုအားတူညီသောသေခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဘုရားသခင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် (တ ၁၂း၆-၁၁)။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ဘုရားသခင်၏ကျေးကျွန်တစ် ဦး ၏ကာကွယ်မှုသည်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်မကြာခဏဆက်စပ်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်တမန်တော်ပေါလု၏ကာကွယ်မှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်ဘုရင်များအားဟောပြောရန်ဖြစ်သည် (တ ၂၇း၂၃၊ ၂၄၊ ၉း၁၅၊၁၆)။
၂ - ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမေးခွန်းသည်စာတန်၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အထူးသဖြင့်ယောဘနှင့်ပတ်သက်သောမှတ်ချက်များတွင်ဖြစ်သည်: “ခင်​ဗျား​က သူ့​ကို​ရော သူ့​အိမ်​နဲ့ ပိုင်​ဆိုင်​သမျှ​ကို​ပါ ကာ​ကွယ်​ပေး​ထား​တာ​ကိုး။ သူ​လုပ်​သမျှ​ကို ကောင်း​ချီး​ပေး​ပြီး ခြံ​မွေး​တိရစ္ဆာန်တွေ​ကို​လည်း ပွား​များ​စေ​တာ​ကိုး" (ယောဘ ၁း၁၀)။ သမာဓိရှိခြင်းမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ဘုရားသခင်သည်ယောဘသာမကလူသားအားလုံးမှကာကွယ်မှုကိုဖယ်ရှားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ယေရှုမသေဆုံးမီလေးတွင်ဆာလံ ၂၂း၁ ကို ကိုးကား၍ ဘုရားသခင်ကသူ့အားအကာအကွယ်အားလုံးဖယ်ရှားပေးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သူသည်ယဇ်အဖြစ်အသေခံခဲ့သည် (ယော ၃း ၁၆၊ မဿဲ ၂၇:၄၆) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေလူသားထုတစ်ရပ်လုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင့်အကာအကွယ်ပေးမှုကင်းမဲ့ခြင်းသည်အလုံးစုံမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာဘုရားသခင်သည်မာရ်နတ်အားယောဘအားသတ်ရန်တားမြစ်သည့်နည်းတူလူသားအားလုံးအတွက်လည်းအလားတူဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည် (မဿဲ ၂၄း၂၂)။
၃ - ဆင်းရဲခက်ခဲမှုများသည်“ ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအချိန်နှင့်ဖြစ်ရပ်များ” ၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူတို့သည်မှားယွင်းသောအချိန်တွင်မှားယွင်းသောနေရာ၌ရောက်ရှိနိုင်သည် (ဒေသနာ ၉း ၁၁၊၁၂)။ ထို့ကြောင့်လူသားများသည်မူလအားဖြင့်အာဒံရွေးချယ်ခဲ့သောရွေးချယ်မှု၏အကျိုးဆက်များမှကာကွယ်မှုမခံရပါ။ လူသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာပြီ၊ ဖျားနာကာသေဆုံးသည် (ရော ၅း ၁၂)။ သူသည်မတော်တဆမှုများသို့မဟုတ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၏သားကောင်ဖြစ်နိုင်သည် (ရောမ ၈:၂၀၊ ဒေသနာကျမ်းသည်လက်ရှိဘဝ၏အချည်းနှီးဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အသေးစိတ်ကျသောဖော်ပြချက်ပါရှိသည်။ "တ​ကယ် အချည်း​နှီး​ပဲ။ တ​ကယ် အချည်း​နှီး​ပဲ။ အရာရာ​ဟာ အချည်း​နှီး​ပါ​ပဲ” လို့ နည်း​ပြဆ​ရာ ပြော​တယ်” (ဒေ ၁း၂))။
ထို့အပြင်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏မှားယွင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များ၏အကျိုးဆက်များမှလူသားများကိုကာကွယ်ပေးသည်မဟုတ်ပါ: “လှည့်​စား​မခံ​ကြ​ပါ​နဲ့။ ဘု​ရား​သခင်​ကို မခန့်​လေး​စား​လုပ်​လို့ မရ​ဘူး။ လူ​ဟာ မျိုး​စေ့​ကြဲ​တဲ့​အတိုင်း ရိတ်​သိမ်း​ရ​လိမ့်​မယ်။ အပြစ်​ရှိ​တဲ့ အလို​ဆန္ဒ​အ​တိုင်း မျိုး​စေ့​ကြဲ​တဲ့​သူ​က အပြစ်​ရှိ​တဲ့ အလို​ဆန္ဒ​အတိုင်း ပျက်​စီး​ခြင်း​ကို​ပဲ ရိတ်​သိမ်း​ရ​လိမ့်​မယ်။ စွမ်း​အား​တော် လမ်း​ပြတဲ့​အတိုင်း မျိုး​စေ့​ကြဲ​တဲ့​သူ​က​တော့ စွမ်း​အား​တော် လမ်း​ပြတဲ့​အတိုင်း ထာ​ဝ​ရ​အသက်​ကို ရိတ်​သိမ်း​ရ​လိမ့်​မယ်” (ဂလာ ၆း၇၊၈)။ ဘုရားသခင်သည်လူသားများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအချည်းနှီးဖြစ်စေခဲ့သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရှိသောအခြေအနေ၏အကျိုးဆက်များမှသူ၏ကာကွယ်မှုကိုသူရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဟုကျွန်ုပ်တို့အားနားလည်စေသည်။ အကယ်စင်စစ်လူသားအားလုံးအတွက်ဤဘေးအန္တရာယ်အခြေအနေမှာခေတ္တယာယီဖြစ်လိမ့်မည် (ရော ၈း၂၁) ။ မာရ်နတ်၏စွပ်စွဲချက်ကိုဖြေရှင်းပြီးသည့်နောက်လူသားတို့သည်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ဘုရားသခင့်ကောင်းမြတ်သောကာကွယ်မှုကိုပြန်လည်ရရှိကြလိမ့်မည် (ဆာလံ ၉၁း၁၀-၁၂)။
ငါတို့ကိုဘုရားသခင်ကာကွယ်မထားဘူးလား ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ပေးသောကာကွယ်မှုသည်အဆုံးတိုင်အောင်ခံနိုင်ရည်ရှိပါကထာဝရအသက်မျှော်လင့်ချက်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏ထာဝရအနာဂတ်အတွက်ဖြစ်သည် (မဿဲ ၂၄:၁၃; ယောဟန် ၅:၂၈၊ ၂၉; တမန်တော် ၂၄:၁၅; ဗျာဒိတ် ၇:၉-၁၇)။ ထို့အပြင်ယေရှုခရစ်သည်နောက်ဆုံးကာလ၏နိမိတ်လက္ခဏာ (မဿဲ ၂၄၊၂၅၊ မာကု ၁၃ နှင့်လုကာ ၂၁) နှင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်း (အထူးသဖြင့်အခန်း ၆း ၁-၈ နှင့် ၁၂း ၁၂) တွင်ဖော်ပြသည်။ လူသားများသည် ၁၉၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ကြီးမားသောကံဆိုးမှုများကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသမ္မာကျမ်းစာမှနှုတ်ကပါဌ်တော်၌ပါရှိသောသူ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလမ်းညွှန်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီကိုကာကွယ်ရန်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရလျှင်၊ ကျမ်းစာမူများကိုကျင့်သုံးခြင်းကကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်မဲ့စွာအသက်တိုစေနိုင်သောမလိုအပ်သောအန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီပေးသည် (သုတ္တံ ၃း၁၊၂)။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင့်လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သောကျမ်းစာမူများကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုထိန်းသိမ်းရန်လမ်းမကူးမီလက်ျာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်သို့သေချာစွာကြည့်ခြင်းနှင့်တူလိမ့်မည် (သု ၂၇း၁၂)။
ထို့အပြင်တမန်တော်ပေတရုသည်ဆုတောင်းခြင်းလိုအပ်သည်ကိုအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်: “အရာ​ခပ်​သိမ်း​ရဲ့ အဆုံး ရောက်​ခါ​နီး​ပြီ။ ဒါ​ကြောင့် ချင့်​ချိန်​တတ်​သူ​တွေ ဖြစ်​ကြ​ပါ။ ဆု​တောင်း​ဖို့ အမြဲ အသင့်​ရှိ​နေ​ကြ​ပါ” (၁ ပေ ၄း၇)။ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟန်ချက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည် (ဖိ ၄း၆၊၇; ကမ္ဘာ ဦး ၂၄း၆၃)။ အချို့ကသူတို့၏ဘ ၀ များတွင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ဘုရားသခင်ကကာကွယ်ပေးသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ၎င်းသည်သမ္မာကျမ်းစာအရဖြစ်နိုင်သည်: “ငါ​မျက်နှာသာပေး​ချင်တဲ့​သူ​ကို မျက်နှာသာပေး​မယ်။ ကရုဏာ​ပြ​ချင်တဲ့​သူ​ကို ကရုဏာ​ပြ​မယ်" (ထွက်မြောက်ရာ ၃၃:၁၉)။ ငါတို့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး: "ခင်​ဗျား​က ဘယ်​သူ​မို့လို့ သူ​တစ်​ပါး​ရဲ့​အစေ​ခံ​ကို ပြစ်​တင်​ဝေ​ဖန်​တာ​လဲ။ သူ့​သခင်​ဟာ ခင်​ဗျား​မဟုတ်​ဘူး၊ ဘု​ရား​သခင်​ပဲ။ သူ့​လုပ်​ရပ် မှား​သလား၊ မှန်​သလား​ဆို​တာ​ကို ဘု​ရား​သခင်​ပဲ ဆုံး​ဖြတ်​ပိုင်​ခွင့်​ရှိ​တယ်။ ယေဟောဝါ* ကူ​ညီ​ပေး​လို့ ရှေ့​တော်​မှာ သူ ရပ်​တည်​နေ​တာ" (ရော ၁၄း ၄)။
ဆင်းရဲဒုက္ခများမပြီးဆုံးမီကျွန်ုပ်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြပြီးအချင်းချင်းကူညီရမည်။ “အချင်း​ချင်း ချစ်​ကြ​ပါ​ဆို​တဲ့ ပညတ်​အသစ်​တစ်​ခု ကျွန်​တော်​ပေး​မယ်။ ခင်​ဗျား​တို့​ကို ကျွန်​တော်​ချစ်​သလို အချင်း​ချင်း ချစ်​ကြ​ပါ။ အချင်း​ချင်း ချစ်​မယ်​ဆို​ရင် ခင်​ဗျား​တို့​ဟာ ကျွန်​တော့်​တ​ပည့်တွေ​ပဲ​ဆို​တာ လူ​တွေ​သိ​လိမ့်​မယ်” လို့​ပြော​တယ်” (ယော ၁၃း ၃၄၊၃၅)။ တပည့်တော်ယာကုပ်ကဤချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုစိတ်သောကရောက်နေသူအိမ်နီးချင်းအားကူညီရန်အပြုအမူများသို့မဟုတ်အစပြုမှုများအားဖြင့်ပြသရမည်ဟုရေးသားခဲ့သည် (ယာ ၂း၁၅၊၁၆)။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘယ်သောအခါမျှပေးဆပ်ရန်မတတ်နိုင်သောသူတို့ကိုကူညီရန်ယေရှုခရစ်ကပြောကြားခဲ့သည် (လုကာ ၁၄း၁၃၊၁၄)။ ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဟောဝါအား“ ချေးငှား” ပြီးသူကကျွန်ုပ်တို့အားအကြိမ်တစ်ရာပေးဆပ်လိမ့်မည် (သု ၁၉း၁၇)။
ထာဝရအသက်ရရန်ယေရှုခရစ်ဖော်ပြသောကရုဏာပြခြင်းများကိုဖတ်ရှုခြင်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်: “ဘာ​ကြောင့်​လဲ​ဆို​တော့ မင်း​တို့​က ငါ​ဆာ​လောင်​တဲ့​အခါ စား​စရာ ပေး​တယ်။ ရေ​ငတ်​တဲ့​အခါ သောက်​စ​ရာ ပေး​တယ်။ ငါ​ဧည့်​သည် ဖြစ်​တဲ့​အခါ ဧည့်​ဝတ်​ပြု​တယ်။ ငါ​ဝတ်​စ​ရာ မရှိ​တဲ့​အခါ အဝတ်​အစား ပေး​တယ်။ ဖျား​နာ​တဲ့​အခါ ပြု​စု​ပေး​တယ်။ ထောင်​ကျ​တဲ့​အခါ လာ​တွေ့​ကြ​တယ်’ လို့ ပြော​တယ်” (မဿဲ၂၅း၃၁-၄၆)။ ဤလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးတွင်“ ဘာသာရေး” ဟုယူဆနိုင်သောလုပ်ရပ်မရှိကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ယေရှုခရစ်သည်ဤဆုံးမစကားကို“ပူ​ဇော်​သက္ကာ​ကို ငါ​မလို​ချင်​ဘူး။သနား​ကြင်နာ​တတ်​တာ​ကို​ပဲ လို​ချင်​တယ်”ဟူသောစကားကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခဲ့သည် (မဿဲ ၉း၁၃၊ ၁၂း၇)။ လိုအပ်နေသူကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ကိုမြင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်လျှင်သူတို့ကိုကူညီလိမ့်မည် (သု ၃း၂၇၊၂၈)။
ယဇျပူဇျောခွငျးသညျဘုရားသခငျ၏ဝတျပွုကိုးကှယျမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဝိညာဉျရေးရာလုပျဆောငျမှုမြားကိုဆိုလို၏။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ ယေရှုခရစ်သည်သက်ကြီးရွယ်အိုမိဘများကိုမကူညီဘဲ“ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း” ဟုဆင်ခြေပေးသောသူ၏တစ်ခေတ်တည်းသားအချို့ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့သည် (မဿဲ ၁၅း၃-၉)။ ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကိုမဆောင်ရွက်သူများအကြောင်းယေရှုခရစ်မိန့်တော်မူခဲ့ရာကိုသတိပြုရန်မှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ “အဲဒီ​နေ့​မှာ လူ​အများ​က ‘သခင်၊ သခင်၊+ ကျွန်တော်​တို့ သခင့်​နာ​မည်​ကို သုံး​ပြီး ပရော​ဖက်​ပြု​ခဲ့​တယ်၊ နတ်​ဆိုး​တွေ​ကို နှင်​ထုတ်​ခဲ့​တယ်၊ အံ့ဖွယ်​အမှု​တွေ​ကို​လည်း လုပ်​ပြခဲ့​တယ် မဟုတ်​လား’ ဆို​ပြီး ပြော​ကြ​လိမ့်​မယ်'" (မဿဲ ၇း ၂၂) ။မဿဲ ၇း၂၁-၂၃ ကို ၂၅း ၃၁-၄၆ နှင့်ယောဟန် ၁၃း၃၄၊၃၅ တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဝိညာဏ“ ပူဇော်ရာယဇ်” နှင့်ကရုဏာသည်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်သည် (၁ ယော ၃း၁၇၊၁၈; မဿဲ ၅:၇)။
ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်ဆိုးသွမ်းမှုကိုဘုရားသခင်အဘယ်ကြောင့်ခွင့်ပြုရသနည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပရောဖက်ဟဗက္ကုတ် (၁:၂-၄) ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်မှာဤတွင်အဖြေရှိသည်: "ယေဟောဝါ​က ကျွန်​တော့်​ကို ပြော​တယ်– “ဒီ​စိတ်​အာ​ရုံ​အကြောင်း ချ​ရေး​ပါ။ သင်​ပုန်း​ပေါ်​မှာ ရှင်း​ရှင်း​လင်းလင်း ရေး​ထား​ပါ။ ဒါ​မှ ကျယ်​ကျယ်​ဖတ်​ပြမယ့်​သူ​က အလွယ်​တ​ကူ ဖတ်​နိုင်​မယ်။ စိတ်​အာ​ရုံ​က သတ်​မှတ်​ထား​ချိန်​ရောက်​မှ ပြည့်​စုံ​လာ​မယ်။ အဲဒီ​အချိန် အမြန်​လာ​နေ​ပြီ။ အဲ​ဒါ​ဟာ အလိမ်​အညာ မဟုတ်​ဘူး။ နှောင့်​နှေး​ပုံ​ပေါက်​နေ​ရင်​တောင် ဆက်​ပြီး​စောင့်​မျှော်​နေ​ပါ။ ကျိန်း​သေ ပြည့်​စုံ​လာ​မယ်။ နောက်ကျ​မှာ မဟုတ်​ဘူ"” (ဟဗက္ကုတ် ၂း ၂၊၃)။ နောက်လာမည့်အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ဆိုင်ရာမျှော်မှန်းချက်နှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းချက်အချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်:
"အဲဒီ​နောက် ကောင်း​ကင်​သစ်​နဲ့ မြေကြီး​သစ်​ကို ကျွန်​တော်​ မြင်​တယ်။ အရင်​ကောင်း​ကင်​နဲ့ အရင်​မြေကြီး​ဟာ ကွယ်​ပျောက်​ပြီး ပင်​လယ်​လည်း+ မရှိ​တော့​ဘူး။ ၂ သန့်​ရှင်း​တဲ့​မြို့​တော်​ဖြစ်​တဲ့ ဂျေရု​ဆ​လင်​မြို့​သစ်​ဟာ ခင်​ပွန်း​အတွက် ဆင်​မြန်း​ထား​တဲ့ သတို့​သမီး​လို ပြင်​ဆင်​ပြီး ဘု​ရား​သခင်​ဆီ​က​နေ၊ ကောင်း​ကင်​က​နေ ဆင်း​လာ​တာ​ကို​လည်း ကျွန်​တော်​ မြင်​တယ်။ ၃ အဲ​ဒီ​အခါ ရာ​ဇ​ပလ္လင်​က​နေ ကျယ်​လောင်​တဲ့​အသံ ထွက်​ပေါ်​လာ​တာ ကျွန်​တော်​ ကြား​တယ်– “ဘု​ရား​သခင်​ရဲ့ တဲ​တော်​ဟာ လူ​တွေ​နဲ့​အတူ​ ရှိ​ပြီး ဘု​ရား​က သူ​တို့​ဆီ​မှာ စံ​မြန်း​မယ်။ သူ​တို့​လည်း ဘုရား​ရဲ့လူမျိုး ဖြစ်​လိမ့်​မယ်။ ဘု​ရား​သခင်​ကိုယ်တိုင် သူ​တို့​နဲ့​အတူ ရှိ​နေ​မယ်။ ၄ ဘုရား​သခင်​က သူ​တို့​ရဲ့ မျက်​ရည်​ရှိ​သမျှ​ကို သုတ်​ပေး​လိမ့်​မယ်။ သေခြင်း​ရှိတော့​မှာ မဟုတ်​ဘူး။ ငို​ကြွေး​မြည်​တမ်း​ခြင်း၊ အော်​ဟစ်​ခြင်း၊ နာ​ကျင်​ခြင်းလည်း ရှိ​တော့​မှာ မဟုတ်​ဘူး။ အရင်​က​ဖြစ်​ဖူး​တာ​တွေ ကွယ်​ပျောက်​သွား​ပြီ။”" (ဗျာဒိတ် ၂၁း၁-၄)။
"ဝံ​ပု​လွေ​နဲ့ သိုး​သငယ် အတူ​နေ​လိမ့်​မယ်။ ကျား​သစ်​နဲ့ ဆိတ်​က​လေး အတူ​အိပ်​လိမ့်​မယ်။ နွား​က​လေး၊ ခြင်္သေ့၊ ဆူ​ဖြိုး​တဲ့​တိရစ္ဆာန်တွေ အတူ​နေ​မယ်။ က​လေး​သူ​ငယ်​က သူတို့​ကို ထိန်း​ကျောင်း​မယ်။ နွား​မနဲ့ ဝက်​ဝံ​မ အတူ​ ကျက်​စား​မယ်။ သူတို့​ရဲ့​သား​ပေါက်​တွေ အတူ​ အိပ်​ကြ​မယ်။ ခြင်္သေ့​က​လည်း နွား​လို​ပဲ ကောက်​ရိုး​စား​လိမ့်​မယ်။+ နို့​စို့​က​လေး​က မြွေဟောက်​တွင်း​ပေါ်​မှာ က​စား​လိမ့်​မယ်။ နို့​ပြတ်​တဲ့​က​လေး​က အဆိပ်​ပြင်း​တဲ့ မြွေတွင်း​ထဲ လက်​နှိုက်​လိမ့်​မယ်။ သူတို့​က သန့်​ရှင်း​တဲ့ ငါ့​ရဲ့​တောင်​တစ်​ပြင်​လုံး​မှာ ဘာ​အန္တရာယ်​မှ​ပေး​မှာ မဟုတ်​ဘူး။ ဖျက်​လို​ဖျက်​ဆီး​လုပ်​မှာ မဟုတ်​ဘူး။ ပင်လယ်​ဟာ ရေတွေ​နဲ့ ဖုံး​လွှမ်း​နေ​သလို ကမ္ဘာ​မြေဟာ ယေဟောဝါ​ကို သိ​ကျွမ်း​ခြင်း​နဲ့ ပြည့်​နေ​မှာ ဖြစ်​လို့​ပဲ" (ဟေရှာယ ၁၁း ၆-၉)။
"အဲဒီ​အချိန်​ကျ​ရင် မျက်​မမြင်​တွေ မျက်​စိ​မြင်​လာ​မယ်။ နား​မကြား​သူ​တွေ နား​ကြား​လာ​မယ်။ အဲဒီ​အချိန်​ကျ​ရင် ခြေ​ဆွံ့​သူ​ဟာ သမင်​လို ခုန်​ပေါက်​လိမ့်​မယ်။ ဆွံ့​အသူ​က ရွှင်​လန်း​စွာ ကြွေးကြော်​လိမ့်​မယ်။ တော​ကန္တာရ​မှာ ရေတွေ ပန်း​ထွက်​လိမ့်​မယ်။ ကန္တာရ​လွင်​ပြင်​မှာ​လည်း စမ်း​ချောင်း​တွေ စီး​ဆင်း​လိမ့်​မယ်။ ပူ​ပြင်း​ခြောက်​သွေ့​တဲ့ မြေဟာ ကျူပင်​ပေါ​တဲ့​ရေ​အိုင် ဖြစ်​လာ​မယ်။ ခြောက်​သွေ့​တဲ့​မြေဟာ စမ်း​ချောင်း​တွေ​စီး​တဲ့​မြေ ဖြစ်​လာ​မယ်။ ခွေး​အတွေ ကျက်​စား​ခဲ့​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ မြက်​စိမ်း၊ ကျူ​ပင်၊ ပပိုင်း​ရပ်​ကျူ​ပင်​တွေ ပေါက်​လာ​မယ်" (ဟေရှာယ ၃၅: ၅-၇)။
"အဲဒီ​မှာ ရက်​အနည်း​ငယ်​ပဲ​ အသက်​ရှင်​တဲ့ နို့​စို့​က​လေး​တွေ ရှိမှာ မဟုတ်​ဘူး။ သက်​တမ်း​စေ့​မနေ​ရ​တဲ့ အသက်​ကြီး​သူ​တွေ​လည်း ရှိ​မှာ မဟုတ်​ဘူး။ အသက်​တစ်​ရာ​မှာ သေဆုံး​တဲ့​သူ​ကို က​လေး​အရွယ်​ပဲ ရှိ​သေး​တယ်​လို့ ယူ​မှတ်​ကြ​လိမ့်​မယ်။ အပြစ်​ကျူး​လွန်​တဲ့​သူ​ဟာ အသက်​တစ်​ရာ ရှိ​နေ​ရင်​တောင် ကျိန်​ခြင်း​ခံ​ရ​လိမ့်​မယ်။ လူ​တွေ​က အိမ်​တွေ​ဆောက်​ပြီး ကိုယ်​တိုင်​နေ​ထိုင်​ရ​လိမ့်​မယ်။ စ​ပျစ်​ခြံ​တွေ​စိုက်​ပြီး စ​ပျစ်​သီး​တွေ​ကို ကိုယ်​တိုင်​စား​သုံး​ရ​လိမ့်​မယ်။ သူတို့​ဆောက်​တဲ့​အိမ်​မှာ တ​ခြား​သူ​တွေ နေ​ထိုင်​မှာ မဟုတ်​ဘူး။ သူတို့​စိုက်​ပျိုး​တဲ့ အပင်​တွေကို​ တခြား​သူ​တွေ စား​သုံး​မှာ မဟုတ်​ဘူး။ ငါ့​လူ​တွေရဲ့ သက်​တမ်း​ဟာ သစ်​ပင်​ရဲ့ သက်​တမ်း​လို ဖြစ်​မယ်။ ငါ​ရွေး​ချယ်​ထား​သူ​တွေ​ဟာ ကိုယ့်​လုပ်​အား​ရဲ့ အကျိုး​ကျေး​ဇူး​ကို အပြည့် အဝ ခံစား​ရ​လိမ့်​မယ်။ သူတို့​ရော သား​မြေး​တွေ​ပါ ငါ​ယေဟောဝါ​ပေး​တဲ့ ကောင်း​ချီး​ကို ခံစား​ရ​တဲ့​မျိုး​နွယ် ဖြစ်​လိမ့်​မယ်။ ဒါ​ကြောင့် သူတို့ အပင်​ပန်း​ခံ​ခဲ့​သမျှ အချည်း​နှီး​ဖြစ်​မှာ မဟုတ်​ဘူး။ မွေး​လာ​တဲ့ က​လေး​တွေ​လည်း ဘေး​ဒုက္ခ​ခံ​ရ​မှာ မဟုတ်​ဘူး။ သူတို့​မခေါ်​ခင်​က​တည်း​က ငါ​ထူး​မယ်။ သူတို့​ပြော​လို့​မဆုံး​ခင် ငါ​နား​ထောင်​ပြီး အဖြေပေး​မယ်" (ဟေရှာယ ၆၅:၂၀-၂၄)။
"သူ​က လူငယ်​ဘဝ​တုန်း​က​ထက် အသား​အရေ စို​ပြည်​လာ​ပါ​စေ။ လူ​ငယ့်​အား​မာန်​နဲ့​ပြည့်​တဲ့ နေ့​ရက်​တွေ​ကို ပြန်​ရ​ပါ​စေ’ လို့​ပြော​တယ်" (ယောဘကို ၃၃:၂၅)။
"ဗိုလ်​ခြေ​တို့​ရဲ့​အရှင် ယေဟောဝါ​က အဆီ​အနှစ်​များ​တဲ့ ဟင်း​တွေ၊ အကောင်း​စား စ​ပျစ်​ဝိုင်တွေ၊ အဆီ​အနှစ်​များ​ပြီး ခြင်​ဆီ​ပြည့်​နေ​တဲ့ ဟင်း​တွေ၊ စစ်​ထား​တဲ့ စ​ပျစ်​ဝိုင်​အကောင်း​စား တည်​ခင်း​ထား​တဲ့ စားသောက်​ပွဲ​ကြီး​ကို လူ​အားလုံး​အတွက် ဒီ​တောင်​ပေါ်​မှာ ပြင်​ဆင်​ပေး​မယ်။ လူ​အားလုံး​ကို အုပ်​ထား​တဲ့ ခြုံ​ထည်၊ လူမျိုး​အားလုံး​ကို လွှမ်း​ထား​တဲ့ ရက် ထည်​ကို ဒီ​တောင်​ပေါ်​မှာ ဘု​ရား​သခင် ဖယ်​ရှား​မယ်။ သေမင်း​ကို​လည်း ထာ​ဝ​စဉ် ဖယ်​ရှား​မယ်။ အချုပ်​အခြာ​အာ​ဏာ​ပိုင်​ရှင် ယေဟောဝါ​က လူ​အားလုံး​ရဲ့ မျက်​ရည်​ကို သုတ်​ပေး​မယ်။ လူမျိုး​တော်​ခံ​နေ​ရ​တဲ့ ကဲ့​ရဲ့​ရှုတ်​ချ​မှု​ကို မြေပြင်​ပေါ်​က​နေ ဖယ်​ရှား​ပေး​မယ်။ ဒါ​ဟာ ယေဟောဝါ​ရဲ့ အမိန့်​ပဲ" (ဟေရှာယ ၂၅:၆-၈)။
"လူ​သေတွေ ပြန်​ရှင်​လာ​မယ်။ ငါ့​ရဲ့​လူမျိုး​ထဲ​က သေဆုံး​သူ​တွေ ပြန်​ထ​လာ​မယ်။ မြေမှုန့်​ထဲ​မှာ နေ​ထိုင်​သူတို့၊ နိုး​ထ​ပြီး ရွှင်​လန်း​စွာ သီချင်း​ဆို​ကြ။ပြည်​မှာ​ကျ​တဲ့ ဆီး​နှင်း​ဟာ မနက်​ခင်း​မှာ​ ကျ​တဲ့ ဆီး​နှင်း​လို ဖြစ်​လိမ့်​မယ်။ မြေကြီး​က အစွမ်း​မရှိ​တော့​တဲ့ လူ​သေတွေ​ကို အသက်​ရှင်​စေ​မယ်" (ဟေရှာယ ၂၆:၁၉)။
“မြေကြီး​ထဲ​မှာ အိပ်​ပျော်​နေ​သူ အတော်​များ​များ နိုး​ထ​လာ​မယ်။ တချို့​က ထာ​ဝ​ရ​အသက်​ရှင်​ဖို့၊ တ​ချို့​က ကဲ့​ရဲ့​ရှုတ်​ချ​ခံ​ရ​ဖို့၊ ထာ​ဝ​ရ အထင်​သေး​ရွံ​ရှာ​ခံ​ရ​ဖို့ နိုး​ထ​လာ​မယ်” (ဒံယေလ ၁၂:၂) ။
"ဒါ​ကို မအံ့​သြကြ​ပါ​နဲ့။ သင်္ချိုင်း​ဂူ​တွေ​မှာ* ရှိ​နေ​သူ​အားလုံး သား​တော်ရဲ့​အသံ​ကို ကြား​ပြီး ထွက်​လာ​မယ့်​အချိန် ရောက်​လာ​တော့​မယ်။ ကောင်း​တဲ့​အကျင့်​ကို ကျင့်​သူ​တွေ အသက်​ရှင်​ဖို့ ထ​မြောက်​လာ​လိမ့်​မယ်။ ဆိုး​ညစ်​တဲ့​အ​ကျင့်​ကို ကျင့်​သူ​တွေ​က​တော့ တရား​စီ​ရင်ခံရ​ဖို့ ထ​မြောက်​လာ​လိမ့်​မယ်” (ယော ၅:၂၈၊ ၂၉)။
"ဖြောင့်​မတ်​သူ​ရော မဖြောင့်​မတ်​သူ​တွေ​ပါ ရှင်​ပြန်​ထ​မြောက်​လာ​မယ့်​အကြောင်း သူတို့​မျှော်​လင့်​သလို ကျွန်​တော်​လည်း ဘု​ရား​သခင်​ကို အမှီ​ပြု​ပြီး မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်" (တမန်တော် ၂၄:၁၅)။
ယေရှုခရစ်သည်စာတန်ကိုဤသို့ရိုးရှင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်: “သူ​ဟာ အစ​က​တည်း​က လူ့​အသက်​သတ်​တဲ့​သူ​ပဲ။ သူ့​မှာ အမှန်​တ​ရား မရှိ​တဲ့​အတွက် အမှန်​တ​ရား​မှာ သူ တည်​မြဲမနေ​ဘူး။ မု​သား​ပြော​သူ၊ မု​သား​ရဲ့​အဖ ဖြစ်​တဲ့​အတွက် လိမ်​ညာ​ပြော​တဲ့​အခါ သူ့​ရဲ့​ပင်​ကို​ဉာဉ်​အတိုင်း ပြော​တတ်​တယ်” (ယော ၈:၄၄)။ စာတန်သည်တကယ့်နာမ်ဝိညာဉ်သတ္တဝါဖြစ်သည် (မဿဲ ၄:၁-၁၁ တွင်ကြည့်ပါ)။ ထိုနည်းတူစွာနတ်ဆိုးများလည်းစာတန်၏စံနမူနာကိုလိုက်လျှောက်သောပုန်ကန်သူများဖြစ်လာသည့်ကောင်းကင်တမန်များဖြစ်သည် (ကမ္ဘာ ဦး ၆:၁-၃၊ ယုဒအခန်းငယ် ၆ ပါစာနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်: “ဒါ့​အပြင် ကိုယ့်​မူလ​အခွင့်​အရာ​ကို မစောင့်​ထိန်း​ရုံ​မက ကိုယ့်​နေ​ရာ​ကို စွန့်​ခွာ​ခဲ့​တဲ့ ကောင်း​ကင်​တ​မန်​တွေ​ကို တ​ရား​စီ​ရင်ရာ​နေ့​ကြီး​အတွက် မှောင်​မိုက်​မှာ ထာ​ဝ​ရ ချည်​နှောင်​ထား​တယ်")။
ဘုရားသခင်သည်ဤကောင်းကင်တမန်အားသူ၏နှလုံးထဲတွင်အပြစ်နှင့်ဆိုးသွမ်းမှုမရှိဘဲဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဤကောင်းကင်တမန်သည်သူ၏ဘဝအစတွင်“ လှပသောနာမည်” ရှိသည် (ဒေ ၇:၁က)။ သို့သော်သူသည်မဖြောင့်မတ်ဘဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မနေခဲ့ပါ၊ သူသည်သူ၏စိတ်ကိုမာန်မာနကြီးထွားစေခဲ့ပြီးအချိန်တန်သော်သူသည်“ မာရ်နတ်” ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ၏ဟောင်းနွမ်းလှသောနာမည်ဟောင်းဂုဏ်သတင်းကိုအခြားအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ ယေဇကျေလ ပရောဖက်ပြုချက် (အခန်း ၂၈) တွင်မာနကြီးသောတုရုဘုရင်နှင့် ပတ်သက်၍“ စာတန်” ဖြစ်လာသည့်ကောင်းကင်တမန်၏မာနကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်: “လူ​သား၊ တိုင်​ရာ​ဘု​ရင်​နဲ့​ပတ်​သက်​ပြီး ငို​ချင်း​တစ်​ပုဒ်​ဆို​ပါ။ ‘အချုပ်​အခြာ​အာ​ဏာ​ပိုင်​ရှင် ယေဟောဝါ ပြော​တာ​က– “မင်း​ဟာ ပြီး​ပြည့်​စုံ​မှု​မှာ စံ​တင်​ထိုက်​သူ​ပဲ။ ဉာဏ်​ပညာ​ပြည့်​ဝ​သူ၊ ပြစ်​မျိုး​ မှဲ့​မထင် လှ​ပသူ​ပဲ။ မင်း​ဟာ ဘု​ရား​သခင်​ရဲ့ ဧ​ဒင်​ဥယျာဉ်​မှာ နေ​ထိုင်​ခဲ့​တယ်။ ပတ္တ​မြား၊ ဥ​ဿ​ဖရား၊ နဂါးသွဲ့၊ ပြောင်​ခေါင်း​စိမ်း၊ မဟူရာ​ကြောင်ဝင်၊ ကျောက်​စိမ်း၊ နီ​လာ၊ စိမ်း​ပြာ​ကျောက်၊ မြစ​တဲ့ ကျောက်​မျက်​အမျိုး​မျိုး ဆင်​မြန်း​ထား​တယ်။ ရွှေ​ကွပ်​ထား​တဲ့ ကျောက်​မျက်​တွေ​ပေါ့။ မင်း​ကို ဖန်​ဆင်း​တဲ့​နေ့​မှာ အဲ​ဒါ​တွေ​ကို ငါ​ပြင်​ဆင်​ခဲ့​တာ။ အတောင်​ဖြန့်​မိုး​တဲ့ ခေရုဗိမ်​အဖြစ် မင်း​ကို ဘိ​သိက်​ပေး​ပြီး ခန့်​အပ်​ခဲ့​တယ်။ ဘု​ရား​သခင်​ရဲ့ သန့်​ရှင်း​တဲ့​တောင်​ပေါ်​မှာ နေ​ပြီး မီး​တောက်​နေ​တဲ့ ကျောက်​တွေ​အလယ်​မှာ မင်း သွား​လာခဲ့​တယ်။ မင်း​ကို ဖန်​ဆင်း​တဲ့​နေ့​က​စ​ပြီး မင်း​ရဲ့​လမ်း​စဉ်တွေ အပြစ်​ကင်း​ခဲ့​တယ်။ နောက်​ဆုံး​တော့ မင်း​ဆီ​မှာ​ မဖြောင့်​မတ်​မှု တွေ့​လိုက်​ရ​တယ်” (ယေဇကျေလ ၂၈:၁၂-၁၅)။ သူ၏မတရားမှုလုပ်ရပ်ကြောင့်သူသည်အာဒံ၏သားစဉ်မြေးဆက်အားလုံးကိုသေစေသည့်“ မုသာကောင်” ဖြစ်လာခဲ့သည် (ကမ္ဘာ ဦး ၃းရော၊ ၅း၁၂)။ ယခုတွင်ဤလောကကိုစာတန်အုပ်ချုပ်သည်: “ဘု​ရား​သခင်​က ဒီ​လော​က​ကို တ​ရား​စီ​ရင်​နေ​ပြီ။ ဒီ​လော​က​ရဲ့​မင်း​ကို နှင်​ထုတ်​ပစ်​လိမ့်​မယ်” (ယော ၁၂း၃၁၊:ဖက် ၂း၂၊ ၁ ယော ၅း၁၉)။
စာတန်သည်ကောင်းကျိုးအတွက်ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မည်: “ငြိမ်သက်ခြင်း၏အရှင်ဘုရားသခင်သည်မကြာမမြင့်မှီစာတန်ကိုသင်တို့ခြေအောက်၌နှိပ်စက်တော်မူမည်” (ကမ္ဘာ ဦး ၃း၁၅၊ ရော ၁၆း၂၀)။